Degdeg uga timid Superstar -ka "Vanilla Ice" iyo Samsung: Baraf, Ilmo! Sidee loo badbaadiyaa adduunka?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Degdeg uga timid Superstar “Vanilla Ice” iyo Samsung: Baraf, Ilmo! Sidee loo badbaadiyaa adduunka?
Jebinta Wararka Caalamka • Entertainment • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Mareykanka
Degdeg uga timid Superstar “Vanilla Ice” iyo Samsung: Baraf, Ilmo! Sidee loo badbaadiyaa adduunka?
Vanilla Ice waxay iskaashi la samaysaa Samsung Electronics-ka si dib loogu sii daayo hal-ku-dhegga 'Ice, Ice Baby' sida 'Yaraynta Barafkaaga, Barafka Ilmaha'
Fannaankii caanka ahaa ee 90-meeyadii Vanilla Ice ayaa la kaashaday Samsung Electronics si uu dib ugu sii daayo hal-ku-dheggiisii ​​'Ice, Ice Baby' oo ahaa 'Dhimista Barafkaaga, Barafka Ilmaha', isagoo gudbinaya farriin awood leh "oo leh gees waarta".
Fiidiyowga muusigga ee cusub ayaa fannaanku ku dhiirri-gelinayaa taageerayaasha inay sameeyaan isbeddel yar oo leh farqi weyn, isagoo adduunka ugu yeeraya inay kordhiyaan heerkulka qaboojiyayaashooda, sidaas darteedna ay hoos u dhigaan raadadka kaarboonka shaqsi kasta si ay u yeeshaan saamayn caalami ah iyo mid wadareed.
Xog cusub oo laga soo saaray Samsung ayaa muujinaysa in haddii qoys walba oo ku nool Yurub uu ku kordhiyo heerkulka qaboojiyaha 1 darajo Celsius1, qaddar la saadaaliyay in ka badan 1 milyan oo tan oo qiiqa CO2 ah ayaa la badbaadin karaa sanadkiiba 2.
Tani waxay u dhigantaa qiiqa CO2 ee ka soo baxa in ka badan 217,000 baabuur oo rakaab ah oo la waday sannad dhan, in ka badan 2.5 bilyan oo mayl oo ay gaadheen celceliska gaadhiga rakaabka ama isticmaalka tamarta muddo sannad ah in ka badan 120,000 oo guri oo la isku daray 3.
Samsung waxay u dabaaldegeysaa soo saarista nooc cusub oo qaboojiyaha Bespoke ah sida ka muuqashada qalloocan ee fiidiyowga muusigga ee dhowaan la sii daayay. Kaladuwanaantu waxay ku timaaddaa xulashada 14 midab-beddel leh oo ku yaal Boqortooyada Midowday, laga bilaabo pastel dhalaalaya ilaa hal-ku-dhegyo qurux badan, iyo dhammayn kala duwan sida Glam, Satin, Stainless Steel iyo Cotta.
Vanilla Ice ayaa tiri: “Waxaan jecelahay inaan ku noolaado hab -nololeed waara iyo in tamarta wax -ku -oolka ahi ay qayb ka tahay taas. Waxaan had iyo jeer raadiyaa naqshadaha ugu goynta badan gurigeyga, runtiina waxaan jeclahay sida loo habeyn karo safka Bespoke. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan Samsung kala shaqeeyo mashruucan maadaama muusigu yahay hab aad u wanaagsan oo dadka lagu xiro loona faafiyo sheekadan deegaanka. Waxaan rajeynayaa in farriinta la helay cod dheer oo cad, dhammaanteenna waxaan sameyn karnaa wax walba oo aan ku daryeeli karno meeraheena. ”
Tim Beere, Qaboojiyaha Hoggaaminta Sare ee Samsung Europe ayaa yiri: “Waan ku faraxsanahay inaan iskaashi la yeelannay Vanilla Ice mashruucan si aan u faafinno farriin waarta oo aad muhiim noogu ah. Noocyadeena Bespoke ee qaboojiyaha qaybsan waxaa loogu talagalay sii jiritaan iyo isku haleyn maanka ku haysa, iyadoo bixineysa qalab awood u leh inuu sii ahaado mid ka baxsan moodada, milkiilayaasha weheliya sanado iyada oo loo marayo baahidooda mar walba isbedeleysa, dhadhanka, cunnada, iyo qaybaha horumarinta nolosha qoyska. Maareeyeyaasha hawshaan oo waxqabadkoodu sarreeyo waa kuwo si gaar ah loo naqshadeeyay, shaqayna dabacsan, sidoo kalena aad u waara. ”
Heerka qaboojiyaha cusub ee Samsung ee Bespoke ayaa si feker ahaan loogu talagalay in lagu caawiyo yaraynta saamaynta bay'ada iyada oo leh guddiyada la is -beddeli karo iyo naqshadaha qaabaysan ee u oggolaanaya dadka isticmaala inay cusboonaysiiyaan, halkii ay ka beddeli lahaayeen qaboojiyaha waqti ka dib. Booqo samsung.com/vanilla-ice si aad wax badan i